တခါတုနျးက ကိုယျဝနျနစေ့လေ့စနေဲ့ မှေးဖှားခါနီး သမငျမကွီးတကောငျဟာ မီးဖှားစရာနရော ရှာရငျး ရစေီးသနျတဲ့ မွဈတခုရဲ့ဘေးကို ရောကျ လာပါတယျ ။
မိုးကောငျးကငျတခုလုံး တိမျမဲတှနေဲ့ ပွညျ့လာပွီး လြှပျစီးတှေ မိုးကွိုးတှကေလဲ ပဈခနြတေယျ ။ သမငျမကွီးမှာလညျး မှေးခါနီးဗိုကျနာတဲ့ ဝဒေနာ စ ခံစားလာရတယျ ။
အဲ့ဒီအခြိနျမှာ သမငျမ သတိထားမိ လိုကျတာက သူ့ရဲ့ ဘယျဘကျခွမျးမှာ မုဆိုးတယောကျဟာ လေးကိုခြိနျရငျး သူ့အနားခညျြးကပျလာတာကိုပေါ့ ။ ညာဘကျကို ကွညျ့ပွနျတော့ သှေးဆာနတေဲ့ ကြားတကောငျ ကလညျး မာနျဖီပွီး သူ့ကို ခုနျအုပျတော့မယျ ပေါ့ဗြာ။
လောလောဆယျမှာ ရှကေ့ ရစေီးသနျတဲ့မွဈ ဘယျညာမှာက မုဆိုးနဲ့ကြား ဆိုတော့ နောကျပွနျလှညျ့ဖို့ စဉျးစားစဉျ မှာဘဲ သူမ လာခဲ့တဲ့ အနောကျတောအုပျကလညျး တောမီးတှေ လောငျလာပါလရေော ပေါ့ဗြာ။
သမငျမကွီး စဉျးစားရပါပွီ ။ မီးဖှားရမလား? ကြားနဲ့ မုဆိုးရနျက လှတျဖို့ ဆိုရငျ ရှကေ့ ခြောငျးထဲခုနျခပြွီး သမေညျရှငျမညျ မသိတာကိုကွိုးစားရမလား။
(သဖေို့ကမြား) တောမီးကို ဖွတျပွေးရမလား။ ဒါလညျးမသခြော။ သငျဆိုရငျရော ဘာလုပျပါမလဲ? သမငျမကွီး ဘာလုပျမယျ ထငျပါသလဲ?
ဗိုကျကွီးသညျသမငျမဟာ ကလေးကိုဘဲ မှေးခလြိုကျပါတယျ။ ကလေးရော အမရေော အသကျရှငျကွပါတယျတဲ့။
ဇာတျလမျးက ဒီလိုပါ။ သမငျမကွီးက ကလေးကိုဘဲမှေးမယျလို့ ခိုငျခိုငျမာမာ ဆုံးဖွတျပွီး ကိုယျကို လှဲအခြ မုဆိုးကလညျး လေးအပဈ မှာ မွှားလှတျသှားပွီး အဲ့ဒီမွှားက ဆနျ့ကငျြဘကျ ကြားကို တညျ့တညျ့ မှနျပါလရေောတဲ့ဗြာ။
တပွိုငျနကျတညျးမှာဘဲ ကောငျးကငျလာတဲ့ မိုးကွိုးတစငျးကလညျး မုဆိုးကို မှနျသှားသတဲ့။ မညျးနတေဲ့ တိမျတိုကျကွီးကလညျး မိုးအဖွဈပွောငျးပွီး အားရပါးရရှာခလြိုကျတာ တောမီးလညျး ငွိမျးသှားလရေောပေါ့ဗြာ။
(စိတျကူးယဉျဆနျတယျ ပွောလို့ရပမေယျ့ ဘဝမှာ တကယျ့အဖွဈအပကျြတှကေ စိတျကူးယဉျထကျ ဆနျးကယျြတတျပါတယျ။)
စီမံခနျ့ခှဲမှု သငျခနျးစာ တခါတရံ ဘေးကပျြနံကပျြ အခွအေနတှေေ ကွုံရရငျ ဒီပုံပွငျလေးကို သတိရပေးပါ။ သမငျမရဲ့ အဓိက အခွအေနကေ ကလေးမှေးဖို့ပါ။ ကနျြတဲ့ အခွအေနေ ၃ ခုက သူမ မပိုငျမဆိုငျတဲ့ ကိစ်စတှပေါ။
သဘာဝဘေးနဲ့ အခွားသူတှရေဲ့ ပွုမူဆောငျရှကျမှုတှကေို ကိုယျဝငျပါလို့ မရပါ။ ကိုယျ့ကိုယျကို အမွဲ ပွနျမေးပါ။ သငျဘာကို တနျဖိုးထားမှာလဲ။ သငျတနျဖိုးထားတဲ့ အရာရဲ့ နောကျမှာ ကံကွမ်မာနဲ့ မြှျောလငျ့ခွငျး အလငျးရောငျတှေ ကိနျးအောငျးနပေါတယျ ။
တခါတုန်းက ကိုယ်ဝန်နေ့စေ့လစေ့နဲ့ မွေးဖွားခါနီး သမင်မကြီးတကောင်ဟာ မီးဖွားစရာနေရာ ရှာရင်း ရေစီးသန်တဲ့ မြစ်တခုရဲ့ဘေးကို ရောက် လာပါတယ် ။ မိုးကောင်းကင်တခုလုံး တိမ်မဲတွေနဲ့ ပြည့်လာပြီး လျှပ်စီးတွေ မိုးကြိုးတွေကလဲ ပစ်ချနေတယ် ။ သမင်မကြီးမှာလည်း မွေးခါနီးဗိုက်နာတဲ့ ဝေဒနာ စ ခံစားလာရတယ် ။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ သမင်မ သတိထားမိ လိုက်တာက သူ့ရဲ့ ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ မုဆိုးတယောက်ဟာ လေးကိုချိန်ရင်း သူ့အနားချည်းကပ်လာတာကိုပေါ့ ။ ညာဘက်ကို ကြည့်ပြန်တော့ သွေးဆာနေတဲ့ ကျားတကောင် ကလည်း မာန်ဖီပြီး သူ့ကို ခုန်အုပ်တော့မယ် ပေါ့ဗျာ။
လောလောဆယ်မှာ ရှေ့က ရေစီးသန်တဲ့မြစ် ဘယ်ညာမှာက မုဆိုးနဲ့ကျား ဆိုတော့ နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ စဉ်းစားစဉ် မှာဘဲ သူမ လာခဲ့တဲ့ အနောက်တောအုပ်ကလည်း တောမီးတွေ လောင်လာပါလေရော ပေါ့ဗျာ။
သမင်မကြီး စဉ်းစားရပါပြီ ။ မီးဖွားရမလား? ကျားနဲ့ မုဆိုးရန်က လွတ်ဖို့ ဆိုရင် ရှေ့က ချောင်းထဲခုန်ချပြီး သေမည်ရှင်မည် မသိတာကိုကြိုးစားရမလား။(သေဖို့ကများ) တောမီးကို ဖြတ်ပြေးရမလား။ ဒါလည်းမသေချာ။ သင်ဆိုရင်ရော ဘာလုပ်ပါမလဲ? သမင်မကြီး ဘာလုပ်မယ် ထင်ပါသလဲ?
ဗိုက်ကြီးသည်သမင်မဟာ ကလေးကိုဘဲ မွေးချလိုက်ပါတယ်။ ကလေးရော အမေရော အသက်ရှင်ကြပါတယ်တဲ့။
ဇာတ်လမ်းက ဒီလိုပါ။ သမင်မကြီးက ကလေးကိုဘဲမွေးမယ်လို့ ခိုင်ခိုင်မာမာ ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုယ်ကို လှဲအချ မုဆိုးကလည်း လေးအပစ် မှာ မြှားလွတ်သွားပြီး အဲ့ဒီမြှားက ဆန့်ကျင်ဘက် ကျားကို တည့်တည့် မှန်ပါလေရောတဲ့ဗျာ။
တပြိုင်နက်တည်းမှာဘဲ ကောင်းကင်လာတဲ့ မိုးကြိုးတစင်းကလည်း မုဆိုးကို မှန်သွားသတဲ့။ မည်းနေတဲ့ တိမ်တိုက်ကြီးကလည်း မိုးအဖြစ်ပြောင်းပြီး အားရပါးရရွာချလိုက်တာ တောမီးလည်း ငြိမ်းသွားလေရောပေါ့ဗျာ။ (စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တယ် ပြောလို့ရပေမယ့် ဘဝမှာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေက စိတ်ကူးယဉ်ထက် ဆန်းကျယ်တတ်ပါတယ်။)
စီမံခန့်ခွဲမှုသင်ခန်းစာ တခါတရံ ဘေးကျပ်နံကျပ် အခြေအနေတွေ ကြုံရရင် ဒီပုံပြင်လေးကိုသတိရပေးပါ။ သမင်မရဲ့ အဓိက အခြေအနေက ကလေးမွေးဖို့ပါ။ ကျန်တဲ့ အခြေအနေ ၃ ခုက သူမ မပိုင်မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။
သဘာဝဘေးနဲ့ အခြားသူတွေရဲ့ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုတွေကို ကိုယ်ဝင်ပါလို့ မရပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲ ပြန်မေးပါ။ သင်ဘာကို တန်ဖိုးထားမှာလဲ။ သင်တန်ဖိုးထားတဲ့ အရာရဲ့ နောက်မှာ ကံကြမ္မာနဲ့ မျှော်လင့်ခြင်း အလင်းရောင်တွေ ကိန်းအောင်းနေပါတယ် ။